Maamulka Soomaali-diidka sidee baa loo baabi’in karaa? | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Maamulka Soomaali-diidka sidee baa loo baabi’in karaa?
Maamulka Soomaali-diidka sidee baa loo baabi’in karaa?
Sidan soo sheegeyba, Waxaan qabaa in markan Dowladda Federaalka ay ula dhaqanto maamulka Soomaaliland si ka duwan sidii hore, Iyadoo ku dhaqaaqeysa qorshe ka kooban sedex waji. Kaasi oo loo fulinayo si wadajir ah si meesha looga saaro maamulkaasi Soomaali-diidka ah ee ay ka go’an tahay kala qeybinta dadka Soomaalida iyo dalkooda. Qorshahan oo ka kooban sedexdan waji:
Kow, In la soo afjaro dhammaan xirirada uu maamulkaasi la leeyahay dhinacyada dibadda sida dowladaha oo kale, Iyadoo dhinacyadaasi la saarayo cadaadisyo xooggan si ay u joojiyaan xiriirada tooska ah ee ay la leeyihiin maamulkaasi Soomaali-diidka ah. Halka dhinaca kalena lagu qasbayo dhinacyadaasi inay la macaamilaan Dowladda Dhexe maadaama ay Iyadu masuul ka tahay deegaanadaasi.
Labo, In la taageero dhammaan dhinacyada ka soo horjeeda nidaamkaasi sida dadka ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Awdal oo kale Iyadoo loo dhisayo maamul goboleedyo taageersan midnimada iyo wadajirka dalka, Islamarkaana u adeega dadka ka soo jeeda deegaanadaasi oo ah dad ay ku weyn tahay midnimada iyo wadajirka dalka. Maamuladaasi oo qeyb ka ah hanaanka federaaliga ee dalka ka jira.
Wey fududdahay runtii in deegaanadaasi laga dhiso maamul goboleedyo sida Khaatumo State oo kale maadaama dadku ku dhaqan deegaanadaasi ay garwaaqsadeen inay meesha ka sii baxeyso qadiyaddii gooni-isutaagga iyo waliba fursadihii uu maamulkaasi haystay. Halka dhinaca kalena ay sii kobceyso awoodda Dowladda Dhexe. Taasi oo dooneysa in dalkan la mideeyo, Islamarkaana laga hergeliyo nidaam dowladeed oo si fiican u shaqeeya.
Haddii maamulka gacantiisa laga bixiyo gobolada kala ah Sool, Sanaag iyo Awdal, Taasi waxay soo dadajineysaa inay meesha ka baxdo awoodihi uu maamulkaasi lahaa haddii ay ahaan lahaayeen awoodo dhaqaale, kuwa siyaasadeed iyo waliba kuwa militari. Halka uu dhinaca kalena galayo go’doon baahsan maadaama dhinac walba laga xigo. Waxaa sidoo kale meesha ka baxayo sheekadii ahayd waxaan maamulnaa dhulkii uu Ingiriisku gumeysan jiray.
Sedex, In la taageero dadka ka soo jeeda beesha isaaq, gaar ahaan kuwa doonayo midnimada iyo wadajirka dalka Iyadoona lagu caawinayo sidii ay meesha uga saari lahaayeen maamulka Muusa Biixi. Kaas oo runti ay ku adag tahay in uu ka tanaasulo qadiyadda gooni-isutaagga. Waxaa sidoo kale maamulkaasi ku adag in uu aqbalo hanaanka federaalismka ee dalka ka jira. Waana sababtaasi sababta aan u leeyahay waa in meesha laga saaraa.
Haddii aan nahay xoogagga Islaamiyiinta Soomaalida marka laga reebo Xarakada Al-shabab, waxaan diyaar u nahay inaan Dowladda Federaalka ka caawinno sidii ay meesha uga saari lahayd maamul kasta oo caqabad ku noqda helitaanka qaran Soomaaliyeed oo mid ah. Waxaan kaloo diyaar u nahay in Dowladda aan ka caawinno sidii ay uga faa’iideysan lahayd biseylka ka muuqda dadweynaha Soomaaliyeed, Kuwaasi oo aad mooddo inay ku daaleen aragti aan shaqeyneynin.
Ugu danbeyn, waxaan kula talinayaa Dowladda Federaalka inaysan waqti badan ku luminin la hadalka maamulka Soomaaliland maadaama uu maamulkaasi ka tanaasuleyn qadiyadda gooni-isutaagga. Waxaan kaloo kula talinayaa in xoogga la saaro sidii nidaamkaasi meesha looga saari lahaa Iyadoo la adeegsanayo awoodda dowladda, culimada, ganacsatada, aqoonyahanada iyo waliba warbaahinta ay gacanta ku hayaan dadka ay ku weyn tahay midnimada iyo wadajira dalka.